Saameynta gacan -qalooca curveure of convex iyo concave section on conveyor suunka
Saamaynta radius curveure of convex iyo concave section on conveyor suunka Arch oo ku yaal bartamaha isgoyska suunka convex Qaybta convex ee suunka gudbiyaha badanaa wuxuu ka dhacaa badhtamaha qaybta suunka ee jihada qaansada, labaduba . Iyo suunka ...
Conveyer wuxuu inta badan la kulmaa dhibaatooyin iyo xalal
Mid. suunka gudbiyaha leexashada socda: 1. Ka leexashada dhululubada dibedda ee rullaluhu aad buu u weyn yahay, rullaluhu ma toosna (toosnaanta ayaa ka baxsan dulqaadka), wareegtuna ma aha mid dabacsan, iwm, sidoo kale waxay sababi doontaa suunka leexasho. 2. Rakibaadda xariiqa xarunta rullaluuqa ...
Waa maxay tallaabooyinka farsamo ee amniga iyo arrimaha
Waa maxay tallaabooyinka farsamo ee badbaadada iyo arrimaha u baahan fiiro gaar ah marka suunka lagu xiro dhulka hoostiisa laga qodo macdanta dhuxusha? Diyaargarowga kahor rakibidda 1: Diyaarinta farsamada A: Waaxda geosurvey waxaa laga rabaa inay sii dayso khadka dhexe ee suunka ...
Qabashada leexashada suunka gudbiyaha
Ka leexashada suunka waa khaladka ugu badan marka suunka gudbiyaha uu socdo. Waa inaan fiiro gaar ah u leenahay saxnaanta cabbirka rakibidda iyo dayactirka maalinlaha ah. Waxaa jira sababo badan oo leexashada, kuwaas oo u baahan in loola dhaqmo si kala duwan iyadoo loo eegayo sababo kala duwan. 1. Hagaaji dhalmada ...
Wiishka ceebaha iyo xalalka caadiga ah
Wiishashku waa nooc ka mid ah qalabka farsamada, marka la adeegsado waqtiga geedi socodka waxaa hubaal ah inay muuqan doonaan cillado iyo cillado yaryar, markaa marka xaalad degdeg ahi timaaddo sidee wax looga qaban karaa? Soo saaraha wiishka soo socda Pack King Automatic Equipment Co., Ltd. inta badan adeegsadaha wiishka ...
Gawaarida suunka u janjeera maxaa u simbiriirixan doona?
Gawaarida suunka u janjeera maxaa u simbiriirixan doona? Gawaarida dabacsan maxaa badanaa u muuqda ifafaale baraf -cad? Sidee loo xalliyaa ifafaalaha barafka? Xaglaha gudbiyaha suunka waa adeegsiga suunka gudbiyaha si loogu gudbiyo maaddada gudbinta bulsheed ee bulsheed iyo khilaaf u dhexeeya rullaluuqa, ka dibna u dir alaabta Ama ...
Usheeda dhexe ee jaban
Mashiinka jajaban ee soo-qaadaha suunka wax-dhimista wuxuu ku dhacaa mashiinka xawaaraha sare ee soo-qaadaha. Waxa ugu badan ayaa ah in la isticmaalo marxaladda koowaad ee dib -u -yareeyaha oo loogu talagalay mashiinka giraanta bevel toosan ee usha xawaaraha sare leh. Waxaa jira laba sababood oo ugu waaweyn jabinta usha. Xoogga design ee usheeda dhexe xawaaraha sare ...
Wareega Suunka Gubashada, Wiishka baaldiga ee rogaya, Gudbinta Silsiladda, Xamuulka Fayadhowrka, Z wiishka baaldi, Wiishashka Cuntada,